KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maraykanka oo sheegay inuu qayb ka ahaa weerakii Fashilmay ee Soomaaliya
Monday 14 January 2013 08:22
Maraykanka oo sheegay inuu qayb ka ahaa weerakii Fashilmay ee Soomaaliya
Muqdisho (KON) Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama ayaa sheegay in dowlada Maryakanka ay wax ka ogeed weerarkii guul dareestay ee ciidamada Faransiiska ay ka geesteen Soomaaliya.
Barack Obama madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo Mareykan ah qeyb ka ahaayeen howlgalkii lagu soo qaaday Soomaaliya.
Sidoo Kale Obaama ayaa hoosta ka xariiqay in kaliya ciidamadiisa ay Faransiika ka caawiyeen dhanka Farsamada ee lagu weeraray xarunta Al-Shabaab maalintii jimcada ahayd ee Buulo-mareer.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in diyaaraha Maraykanka ay ku jireen hawada Soomaaliya intii uu socday Howlgalkaasi dhicisoobay.
Hadalka Madaynaha Maraykanka ayaa wuxuu ku soo adayaa xili dowlada Faransiiska ay sheegtay in aysan joojin doonin ugaarsiga kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-qaacida.
Keydmedi Online Xafiiska Muqdisho